10 Most Beautiful Tsime In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Most Beautiful Tsime In Europe
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 01/01/2021)
Kune akawanda akanaka uye akanaka mamaki muEurope. Kuseri kwekona yega yega, kune shongwe kana bindu rekushanyira. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza uye zvinoshamisa ndeye tsime rakaisvonaka, uye isu takasarudzwa-ruoko 10 yematsime akanaka kwazvo muEurope.
Zvemumhanzi, zvinodadisa, Matsime eEurope anoshamisa. Kubva kuParis kuenda kuBudapest, pakati peguta kana pachiwi, izvi 10 matsime anoshamisa akakosha kushanya.
1. Trevi Tsime MuRome
Tsime rakakura uye rakakurumbira muRome itsime reTrevi. Tsime rinoyevedza rinodurura nezve 2,824,800 cubic tsoka dzemvura zuva rega rega. wo, munguva dzevaRoma raive sosi yemvura yepakati. saka, uchaona kuti tsime reTrevi riri pamharadzano yemigwagwa mitatu "Tre Vie" iyo mitatu nzira tsime.
Kana iwe waisaziva, Tsime reTrevi ndechimwe chezvishamiso zvinomwe zveEurope. saka, hazvishamise kuti tsime rakanaka kwazvo muEurope yakaratidza mafirimu mazhinji, senge Zororo reRoma.
Iripi Tsime reTrevi MuRome?
Iyo inofema Trevi tsime ingori gumi-maminetsi 'kufamba kubva kuSpanish Matanho. Iwe unogona zvakare kutora tramu kuenda kuBarberini chiteshi.
2. Tsime reTrocadero
Chinhu chinonyanya kushamisa cheTrocadero tsime ndiro tsime reWarsaw iri pakati. Iyo yakaita bheseni, ne 12 matsime akaipoteredza. saka, chiitiko cheEiffel Tower uye tsime rakanyanyisa.
The mapindu akanaka uye matsime pakutanga aive chikamu cheTrocadero Palais, ivo vakasikwa mu 1878 nekuratidzwa kwepasirese. Kutarisana neSeine rwizi, kumashure Palais du Chaillot uye kumberi kweEiffel Tower, tsime reTrocadero ndiyo yakanaka pikiniki nzvimbo muParis, uye Europe.
Maitiro Ekuenda kuTrocadero?
Iwe unogona kusvika kune iyo Gardens yeTrocadero uye tsime nemetro, kuenda kuchiteshi cheTrocadero.
3. Tsime reLatona MuVersailles
Pane 55 matsime muminda ye Versailles, asi chakanyanya kunaka uye chinoshamisa itsime reLatona. La Latona tsime rakafuridzirwa naOvid's Metamorphoses, Latona amai vaAppollo naDiana, inoratidzwa nevana vayo mune iri tsime rine mbiri.
Kutarisana neGreat Canal, iwe unogona nyore kuona uye kuyemura chiratidzo chaMambo Louis XIV kubva chero kupi kuVersailles. Munguva yepamusoro mwaka iwe unogona kunakidzwa nechitubu mimhanzi show inoitika 3 nguva pasvondo.
Nzira Yekusvika kuLatona?
Versailles palace iri muVersailles dhorobha, chete 45 maminetsi nechitima kubva kuParis. Unogona kutora chitima kuenda kuVersailles Chateau Rive Gauche chiteshi. Ipapo iko kungori kufamba kushoma kubva kuchiteshi kuenda kumuzinda uye magadheni.
La Rochelle kuNantes Chitima Mitengo
Toulouse kuenda kuLa Rochelle Chitima Mitengo
Bordeaux kuenda kuLa Rochelle Chitima Mitengo
Paris kuenda kuLa Rochelle Chitima Mitengo
4. Tsime reEfteling
Tsime rinonakidza kwazvo remumhanzi muEurope ndiyo tsime remimhanzi muEfteling theme park. Iwe unozoshamiswa ne 12 maminetsi mwenje uye kuratidza kwemvura, uko matatya anoshandura mvura kuita yakanaka ballet show.
Iyo Aqunura tsime system yakavakirwa iyo Efteling 60 mhembero. Kupedza, chiratidziro chemimhanzi kuperera kukuru kurwendo rwemhuri kune runoshamisa Efteling theme paki.
Maitiro Ekuenda Kune Efteling Tsime?
Iyi paki inoshamisa ingori awa kubva kuAmsterdam, saka zvakakwana kumhuri inonakidza zuva-rwendo kubva kuAmsterdam.
5. 1o Zvakanakisisa Matsime MuEurope: Tsime reTrafalgar
Mermaids uye Tritons ndiyo yepakati zvidhori muTrafalgar Square tsime. zvisinei, kusiyana nemamwe matsime, hapana rungano shure kwesarudzo yezvisikwa zvegungwa. Tsime rakanaka kwazvo muLondon rakatanga kuvakwa mu 1841 kudzikisira nzvimbo yevanoratidzira.
Iwe uchawana tsime reTrafalgar Square pamberi peNational Gallery muLondon. Pamusoro pe, iwe unofanirwa kuziva kuti ndiko kunouya veLondon kwekunakidzwa kweKisimusi. saka, iwe unenge uine chimwe chikonzero chikuru chekushanyira imwe yematsime akanaka kwazvo muEurope.
Nzira Yekusvika Kune Iyo Trafalgar Tsime MuLondon?
Unogona kuenda kuCharing Cross chubhu chiteshi kubva chero nzvimbo muLondon.
6. Swarovski Tsime MuInnsbruck
Tyrol dunhu ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa muAustria, pamwe nekumba kuS Swarovski dzimbahwe. Iyo Swarovski tsime iri mune iyo Swarovski Crystal Worlds, yakaoma yekuvaraidza uye chikafu. Chaive chakagadzirirwa girazi rekristaro, Swarovski.
Tsime rakaumbwa kunge musoro wemurume. Ndiyo imwe yematsime asina kujairika muEurope, uye zvechokwadi unofanirwa kushanyirwa iwe paunenge uchifamba muAustria.
Maitiro Ekuenda Kune Iko Swarovski Tsime mu Innsbruck?
Unogona vanofamba nechitima kubva Innsbruck kusvika Swarovski mune isingasviki awa.
7. Jet Deau MuGeneva
Jeti yemvura, jeti yemvura muChirungu, ndiye tsime rakareba kwazvo muEurope uye rinogona kusvika 400 mamita. pakutanga, tsime rakavakwa kudzora kuwedzeredza kumanikidzwa kweiyo hydraulic chirimwa kuLa Coulouvreniere, asi munguva pfupi yakave chiratidzo chesimba.
saka, zvakaoma kupotsa Jet Deau paunoshanyira Geneva. Saizvozvo, unogona kuwana nzira yako kuLake Geneva, kana ukangoteedzera iyo jeti yemvura.
Lyon kuGeneva Chitima Mitengo
Bern kuGeneva Chitima Mitengo
8. Tsime reStravinsky, Paris
Chitubu cheStravinsky muCentre Pompidou mutero wemimhanzi kumunyori weRussia, Igor Stravinsky. Miromo yakajeka yakajeka, a chiseko, uye zvimwe zvivezwa zvinosemesa zvinoita kuti tsime iri rekusimbisa rive rimwe rematsime asina kujairika muEurope. Iyo dhizaini yakagadzirwa neyakavezwa Jean Tinguely uye pendi Niki de Saint Phalle. Ose maartist ane akasiyana masitayera: a Dadaist maindasitiri kune rumwe rutivi, uye inopenya kune rimwe divi. saka, pamwe chete, basa ravo rinopemberera akanakisa emimhanzi yechinyakare yezana ramakore rechi20.
Hapana mubvunzo, Chitubu cheStravinsky chinotora pfungwa dzako kana uchichiyemura padhuze. Izvo chaizvo sekuona kuita sekasi kuita pamusuwo wepasi-unozivikanwa Pompidou pakati.
Ndingaite Sei Ini Kusvika Kune Iyo Tsime reStravinsky?
Fontaine Stravinsky ari pamusuwo wePompidou Center. Iwe unogona kutora iyo Metro kuenda kuHotel de Ville chiteshi.
Paris kuMarseilles Chitima Mitengo
Marseilles kuParis Chitima Mitengo
Marseilles kuClermont Ferrand Chitima Mitengo
9. Iyo Margaret Island Musical Tsime MuBudapest
Tsime rakakura kwazvo muHungary rinoratidza inoshamisa mimhanzi uye laser show yega awa. Chivabvu kusvika Gumiguru, inguva yakanakisa yekushanyira Margaret Island muBudapest. Iwe unogona kunakidzwa nepikiniki iwe uchiona iwo unoshamisa mvura uye mwenje show.
Chimwe chiitiko chinoita kuti tsime reKrizikova rimwe re 10 matsime akanaka kwazvo muEurope, ndeyekuti kune chiratidziro chemimhanzi chirongwa chevana nevakuru.
Ndingaite Sei Ini Kusvika Kune Iyo Margaret Island Tsime?
Unogona kusvika kuMargaret Island tsime kubva kuBudapest guta repakati netram.
10. Tsime reKrizik MuPrague
Tsime rekutamba, Tsime reKrizik, iri pedyo nenzvimbo yekuratidzira yePrague. Kutanga kubva 8 pm kusvika pakati pehusiku, iwe uchakwanisa kunakidzwa nemwenje wakanakisa uye nemhanzi wakanakisa. Pane 4 inoratidza kana imwe neimwe yanyatsosiyana kubva kune imwe mumhanzi nemarambi.
Chitubu chemumhanzi cheKrizik chakavakwa mukati 1891 yenzvimbo yekuratidzira. Izvo zvave zvichifadza mapoka kubva ipapo. Manheru ane chiratidziro ichave magumo makuru ezuva rakanaka muPrague.
Ndinosvika Sei Krizik?
Iwe unogona kusvika nyore kutsime reKrizik netram kuchiteshi cheVystaviste.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira iwe kuwana yakachipa pashiri ezvitima matikiti kune chero matsime akanaka muEurope.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Akanaka Zvitubu MuEurope”Pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-fountains-europe%2F ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kutsiva iyo tr kuti pl kana nl uye mitauro yakawanda yesarudzo yako.
BeautifulFountains EuropeTraveling Fountains FountainsInEurope MusicalFountain Train Travel